Khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhacay Magaalada Muqdisho | Berberanews.com
Home WARARKA Khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Muqdisho(Berberanews):- Ugu yaraan Shan Ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, in ka badanina ku dhaawacantay laba Qarax oo Isniintii Maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya.
Laba Qarax oo xooggan, ayaa waxay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho. Dad gobjoogayaal ah ayaa sheegaya in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah.
Qaraxa koowaad ayaa ka dhashay baabuur lala eegtay bar kontorool oo ay maamulaan ciidamada amniga Soomaaliya una dhow garoonka diyaaradaha, halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday kan hore oo isna ku qarxay waddada u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo Peace Hotel, sida ay dadka deggan xaafaddaasi u sheegeen VOA.
Illaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in shan qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada. Laba ka mid ah dadkaas waa shacab, halkan qof kalena uu yahay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda iyo labadii qof ee qaraxyada fuliyey.
Ciidammada AMISOM ee haya amniga garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa xaqiijiyey labada qarax ee ka dhacay Muqdisho, waxayna sheegeen in baadhitaan uu socdo. Dadka magaalada ayaa VOA u sheegay in dhowaaqa qaraxyadu ay ahaayeen kuwo aad u culus, islamarkaana ay burburiyeen daaqadaha iyo saqafka guryo goobto ka ag-dhowaa.
Dawladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaaraysay labadaa Qarax ee maanta ka dhacay Muqdisho. Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye, ayaa sheegay in Koox dembiilayaal ahi aanay dawladda Soomaliya ka leexin doonin ujeeddada iyo qorshaha dawladnimo iyo higsiga horumarka.
Inkasta oo aanay jirin cid weli sheegatay, haddana falalka noocan ah waxaa lagu yaqaannaa Kooxda Al-Shabaab ee dawladda iyo Shacabka Soomaaliya dagaalka hubaysan kula jirta.
Previous articleGuddoomiyaha KULMIYE oo Noqday Masuulkii ugu Sarreeyey Somaliland ee u Hoyda degmada Carooley ee Gobolka Xaysimo + SAWIRRO
Next articleCiidanka Booliska Somaliland oo heegan sare la geliyay